ဒီမြေ ဒီရေ နဲ့ ဝေးနေသမျှတော့......
ဆရာမမေငြိမ်းရဲ့ ဝတ္ထုတိုကော ကဗျာလေးကော ခံစားသွားပါတယ်။
i foud your blog in Teen Magazine. it was about " Chit tu ain" by ma ainchannmyay but it also shows ur blog name.From that moment, i m ur biggest fan. especially i like ur poems. keep writing.
ကျနော့်မိတ်ဆွေ ကျောင်းသားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတစ်ယောက်ကပြောဘူးတယ်။ ထောင်ထဲမှာ (ကဗျာ၊သီချင်း စတဲ့) ကိုယ်ဖန်တီးတဲ့အနုပညာလေးကို ထောင်ကျနေသူအချင်းချင်းမျှဝေတဲ့အခါ အနုပညာ မြောက်လွန်းလှရင် အားလုံးက ၀ိုင်းပြီးထောမနာကြပုံက “ကောင်းဗျိုး။ ကောင်းဗျိုး” တဲ့။
အခုလည်း ဆရာမ မေငြိမ်းဝတ္ထုရော၊ ပန်ဒိုရာရဲ့ ကဗျာအတွက်ရော....(ထောင်ထဲမှာ မဟုတ်ပေမယ့်) အင်တာနက်ပေါ်ကပဲ ဟစ်လိုက်ပါရစေ.....“ကောင်းဗျိုး။ ကောင်းဗျိုး”။
မပန် ကဗျာက တကယ်ထိတယ်။ မပန်ကို တကယ် လေးစားပါတယ်။
အတူခံစား အားပေးသူများအားလုံး ကျေးဇူးပါနော်။